XPERIA mini X10, markii ugu horreysay ee lala kulmo Android - Geofumadas
Disember, 2011 GPS / Qalabka, aragti ugu horeysay
Qorshaha Geofumadas ee sanadka 2012 waa tijaabinta barnaamijyada Android, iyadoo la tixgelinayo inay tahay isbeddel aan laga soo kaban karin. Waxaan ka warqabnaa in Apple ay had iyo jeer si fiican u taagnaan doonto heerka moobiilka laakiin ay ka duwan tahay wax kasta oo ku gadaaman meertada Apple ee xiran, Android waxay yeelan doontaa koritaan lama huraan ah
Sidaa daraadeed 2012 waxaanu dardargelin doonaa waxa aan heysano oo lagu muujiyay iPad, oo leh codsiyo u dhigma. Si taas loo caddeeyo waxaan go'aansanay inaan aqbalno qalabka lagu ciyaaro ee 'Ericsson' waxay u adeegtaa wicitaanada ... dhibic; inta soo hartay waxay u muuqataa in la arko sababtoo ah qaddarkoodu si dhib yar ayuu u soo jeedinayaa in la soo gudbiyo, maaha in la baro ama wax barto Tricks for shimbiraha Angry.
Waxaan tixraaceynaa Sonny Ericsson XPERIA mini X10, oo ah qadiyadiisu waa inay noqoto qalab kaas oo aad wax kasta oo aad gacanta ku qaban kartid; laga soo xigtay xaqiiqda waxaa jira aaaaaaaaaaaaaaaaa ...
In navigation jidka iyo ahaanayta badan darfaha saraysa ekaan iPhone / iPad ah, dabcan ma shaqeeyaan zoom isla style gestural (ma aha in this, laakiin HTC ah); sidaas Maps marka daalacanaya Google waa in la riixaya mid ka mid ah.
Aad u fiican, Timescape, meel bannaan oo aad diiradda saari karto dhacdooyinka, sida farriimaha la helay, wicitaanada maqan, Twitter ama Facebook updates ...
Dhab ahaan, waxay leedahay raadiyaha, gps, waxay taageertaa xiriirka 3G iyo wi-fi iyadoon wax badan soo noqon.
keyboard waa style taabashada in Nokia fuliyey, in kasta oo lagu daydo kale keentaa qwerty ah ka dhigaya inaad lumiso faa'iidada mini ah: ay size iyo wixii uu sameeyey gaaro abaalmarinta design dhibic cas iyo Eisa Awards.
Laakiin ugu fiican iyo sababta aan u dooranay waa sababta oo ah nidaamkeeda hawlgalka waa Android, oo ku salaysan keli keli ah iyo horumarinta Qaab-dhismeedka Java. In kasta oo Android Inc. ay iibsatay Google, abuuritaanka Isbahaysiga 'Open Handset Alliance' wuxuu leeyahay rajo wanaagsan.
Farqiga u dhexeeya barnaamijyada Android iyo barnaamijyada Apple
Arrintu waxay noqon kartaa wax xoogaa muran ah maxaa yeelay taageerayaasha Android badiyaa waxay u dagaallamaan raaxaysiga dadka isticmaala Apple-na waxay leeyihiin daacadnimo xad dhaaf ah. Laakiin waxaan rabaa inaan soo bandhigo si aan ugu adeego tixraac ahaan marka aan isbarbar dhigno codsiyada.
Kali talisnimada Apple ayaa dhalatay waqti hore mana badali doonto waqtiga. Steve Jobs si dhib yar ayuu u kordhiyay dacwadda wuuna xiray meertada. Sidaas darteed wax kale ma jiraan oo aan ka ahayn in lagu silco astaamaha Apple oo lagu raaxeysto faa'iidooyinkiisa:
Waxaa si fiican loo dhigaa, inkasta oo iPhone ay u qalantaa waji iyo iPad la is waydiiyay, waxay ku sarreysaa suuqa iyagoo leh qoollo muhiim ah.
codsiyada Up oo kaliya ka dib markii la baadhay iyada oo heer qaar ka mid ah stringency, sidaas qalab yihiin heerka caadiga ah ee wanaagsan ammaanka iyo waxtarka ay u badan ama ka yar doollar 3 halkii ay ka yar.
Ma jirto wado kale oo lagu rakibo, marka laga reebo koontada iTunes ama si toos ah dukaanka Apple. Waa xiran yahay, waa run, laakiin waa waxa iyaga ku soo kordhay iyaga oo aan si fudud loo jabin loona ilaaliyo nidaamka qalliinka.
Ciddii abuuri doonta codsi mac waa inay bixisaa biil sanadle ah oo ah US $ 100 oo kaliya maaha inay soo geliso ee ay sii noolaato. Waxay umuuqataa dibiyada waqtiyada kale, laakiin way shaqaysaa; 14 milyan oo iPad ah oo la iibiyey sanadkii 2010 waxay cadeynayaan qaab faa'iido leh, qaasatan maadaama isticmaalaha Apple loo isticmaalay inuu bixiyo, oo uusan jabsan.
Xaaladdan oo kale, codsiyada Android way ka furan yihiin, waxaa lagu abuuri karaa qalafsanaan yar, laakiin isla sababtaas awgeed waa wax caadi ah in la helo kumanaan aan shaqeynin ama loo isticmaalo wax walba marka laga reebo waxyaabaha wax soo saarka leh. Marka fowdadu sidoo kale kuma imaanayso waxtar, waxa dhacaya ayaa ah in koritaankeedu uu yahay in Amdrpod uu noqon karo Windows-ka soo socda!Waa sidee murugo leh dhawaaqa! laakiin hubaal way ku kori doontaa caan ahaanta. Google wuu ogyahay taas waana sababta ay ugu sharraxayaan dhimashada (kuweenna, ma ahan tooda); Si kastaba ha noqotee, waxay qaadataa waqti iyo qaab rasmi ah ganacsiyada si ay u xasiliyaan hareeraha bilaash la'aanta.
Waxay ku kori doontaa caansaan, u dhintaan bilaash (ha furin)
Waa furan yahay, sidaas darteed shirkadaha oo dhan way kaashadaan, ma aha oo kaliya horumarinta laakiin iibka.
Bixinta codsiyada waxay noqon doontaa qaangaadi iyo badbaadin burcad-badeednimo; waxaa sidoo kale la filayaa in daciifnimada dhammaan shirkadaha wax soo saarka ee heerka heerka ugu dambeeya ee nidaamka qalliinka lagu xallin doono 4.0 (Ice Cream Sandwich)
Hadda waxaan kaliya soo dejiyey laba ka mid ah codsiyada, oo kaliya arag fariinta "kama masuul aha waxyeelada ay keeni karto»Waan dareemay kaliya dareemadaas Habeenki ay Jabhadda Farabundo Martí yimaadeen si ay aabbahay u raadsadaan, seddexdii subaxnimo, iyagoo wata ootooyinkooda gubanaaya iyo qoryaha ugaarsiga ee deegaanka lagala wareegay. Lugaha ayaa i gariiray, halka ninkii xoolo dhaqatada ahaa uu guriga dhex mushaaxayay, isagoo ka careysan imaatinkiisa ... 13 sano ka dib waxaan helay isagoo curyaan ah oo ku jira xero, wuxuu ku jahwareersanyahay fahmida waxa kacaanku u jeedo, waan u naxariistay isaga iyo in ka badan weylaheedu way gariireen.
Waa dareenka aan la hubin, waxa hubaal ah in ay ka yartahay sannadaha 13 si ay u bartaan si loola dagaallamo dhibaatooyinka nidaamka Android, Ma inaan khasaariyo qaraabada dagaalka iyo ...
... XPERIA mini waa mid dhab ah
Post Previous" Hore Paper.li sameyso wargeys dijitaal ah oo kuu gaar ah
Post Next UTM Isku-duwaha shabakadda iyadoo adeegsaneysa CivilCADNext »
6 wuxuu kujawaabaa "XPERIA mini X10, kulanki uguhoreeyay ee Android"
Shaki iigama jiro in Android uu yahay madal weyn, laakiin waa software ... waxay kuxirantahay qalabka aad isticmaaleyso inaad ku raaxeysato.
Si fiican ayaa loo yidhi, waa inaad raadisaa ... ilaa iyo hadda way igu adkaatay inaan helo qalab sida GISPro, Balanced Scorecard ama Woopra on Android.
Runtu waxay tahay, baytarigu wuu niyad jabayaa. Waa lagama maarmaan in la joojiyo GPS-ka iyo wireless-ka haddii aan la istcimaali doonin, sidoo kale hoos u dhig dhalaalka oo ka hortag barnaamijyada aan loo baahnayn inay socdaan.
Waxaan la dagaalamayaa gatica isagu wuxuu leeyahay:
Waqti waad dhaaftay, diirada lagaa saaray, waxaan moodayay in faaladani ay ahayd 2009, sidee ayay faallooyinkani macquul u yihiin markii android suuqa ay taagneyd in kabadan 3 sano, si dhib yar ayaad u ogtahay. Dhammaantood waxay ku soo dhacayaan xaqiiqda ah in android ay tahay iphone "bilaash ah", haddii ay run tahay, way ka sii dhumuc weyn tahay, 0,001% way ka liidataa taabashada, laakiin qalabkeedu 400% ayuu ka sarreeyaa moodooyinka casriga ah ee smas, laakiin waxaan ka heli karaa mid 80% ah 10% qiimaha iphone waan ku noolaan karaa taas. Codsiyada waa isku mid dhammaan laakiin waa bilaash oo waa la hagaajiyay, dabcan waa inaad raadisaa markaad haysato wax kabadan 200.000 waxaad dooran kartaa muuqaalka aad rabto, waayo wax Apple ah c ... cabsida laba sano gudahood waa dhammaatay, waxaan ku dhammeeyay Nokia.
Doorasho wanaagsan, waxaan haystaa Xperia X8 iyo baraha keliya ee aan arko (Au oo aan u malaynayo inuu yahay mid caadi ah oo casriga ah) waa nolosha batteriga.
Ma aha in ay tahay XPERIA?